Afaka esorina ny tadin'ny herin'ny HomePod, fa tsy tokony | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo olana izay ananan'ny haino aman-jery sy ny mpampiasa momba ny HomePod dia mifandraika amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra, tariby izay toa nampidirina tao amin'ilay fitaovana ary hanery antsika hamaky ny boaty Apple hahafahana manolo azy raha sanatria ka masiaka aminy ny biby fiompintsika.
Mifanohitra amin'ny ataon'ny Apple matetika, ny orinasa monina any Cupertino dia nanamafy izany tamin'ny fomba ofisialy ny tariby dia tsy tafiditra tao amin'ilay fitaovana, raha azo soloina izany. Saingy araka ny nandrasana, mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ireo singa voalohany amin'ireo mpividy voalohany dia tsy afaka nahafantatra izay rafi-pifandraisana izahay.
Ireo tovolahy ao amin'ny 9to5Mac, nanelingelina ny mahita inona ny fandidiana sy ny fifandraisana amin'ny tariby herinaratra, tariby, izay hitantsika amin'ny horonan-tsary, dia mitaky fatra maharitra amin'ny hery maharitra hahafahana mamoaka azy. Rehefa vita izany dia re "tehaka" iray manamarina fa nivoaka marina izy, saingy mety tsy mety loatra io fikafahana azy io satria toa hoe rehefa ataontsika imbetsaka io dia amin'ny farany dia hiala ny tariby .
Rehefa mampiditra ny tariby hiverina ao amin'ny lavaka herinaratra isika, dia maheno ilay "mitehafa" indray, manamafy fa nampiditra azy tsara. Ny tariby, araka izay azontsika atao amin'ny dokam-barotra, dia tsy tariby mahazatra (tsy nanantena kely noho ny Apple izahay) noho izany raha misy fahasimbana dia tsara kokoa ny mankany amin'ny fivarotana Apple hanamboatra ny solon'ny tariby mifandraika raha izahay tsy te hitazona ny tariby eo an-tànana sy ny fifandraisana ao anatin'ny HomePod. 29 $ fotsiny ny vidin'ny tariby, vidiny "mahazatra" raha ampitahaintsika amin'ny hafa ao amin'ny orinasa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Afaka esorina ny tadin'ny herin'ny HomePod, fa tsy tokony
Juca olom-pirenena dia hoy izy:
Hitako tamin'ny famerenana iray fa misaraka ny tariby, ka tsy hisy olana amin'ny fanesorana azy sy fametrahana azy?
Valiny ho an'i Citizen Juca